Janrain: Qabashada iyo Kordhinta Joogitaankaaga Bulsho | Martech Zone
Janrain: Qabashada iyo Kordhinta Joogitaankaaga Bulsho
Monday, July 30, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Marka waxaad heysaa joogitaankaaga warbaahinta bulshada oo socda. Waxaad kudarsaneysaa taageerayaasha iyo kuwa raacsan maalinba waxaadna heleysaa xeelad soo booqdayaasha bartaada. Warbaahinta bulshada ayaa ku siineysa kobcin, laakiin ma arkaysid soo noqoshada maalgashiga ee dhammaan aqallada warbaahinta bulshada ay ka hadlayaan. Baraha bulshada ayaa umuuqda shabaqan weyn, laakiin waxba kama qabanaysid maxaa yeelay qof walba wuxuu ku siibanayaa godadka.
Waxaa jira laba dhacdo oo muhiim ah markay tahay suuqgeynta warbaahinta bulshada:
U beddelashada taageere ama raac rajo ama macaamil Sababtoo ah dadku way ku raacayaan ama jecel yihiin boggaaga ma hubinayaan inay dhab ahaantii door bidayaan dadaalka suuqgeyntaada.
U helida taageere ama raac ku sii balaadhi fariintaada shabakadooda. Shabakadaada aasaasiga ah waa mid awood badan, laakiin uguma awood badna sida ka helitaanka taraafikada afka-ka-baxa shabakada taageere.
Janrain Engage wuxuu xirayaa farqiga labada xaaladood, isagoo siinaya bartaada habka soo galitaanka guud ee lagu soo qaado xogta isticmaalaha, iyo inaad siiso bar wadaag wadaag si ay awood ugu siiso kordhinta fudud ee farriintaada shabakadaha taageerayaashaada. Qiyaas inaad awood u yeelan karto inaad qabato cinwaanka emaylka ee qof kasta oo ku hawlan sumcaddaada bulsho, si aad u kobciso liiska emaylkaaga oo aad ugu riixdo dalabyo dheeri ah kuwa doorta!
Janrain Engage waa xalka loo yaqaan 'turnkey xal' oo awood u siinaya dadka isticmaala inay iska diiwaangeliyaan ama ku soo galaan boggaaga koonto ka socota mid ka mid ah 25 + shabakadaha bulshada iyo bixiyeyaasha emaylka, oo ay ku jiraan Facebook, Google, Twitter iyo Yahoo !. Fududee diiwaangelinta, tirtir baahida loo qabo in isticmaaleyaashu ay xasuustaan ​​furayaasha sirta ah isla markaana ka helaan xogta astaanta hodanka ah koontada shabakadda bulshada isticmaalaha rukhsadda.
Janrain waa mid aad u adag oo si fiican isugu dhafan. Haddii CMS-gaagu yahay WordPress, waxaa jira a plugin adag si aad awood ugu siiso Kaqeybgalka bartaada ama bartaada internetka. Janrain sidoo kale wuxuu la midoobaa nidaamyada faallooyinka caanka ah sida Disqus, Echo iyo Pluck.
Hirgelinta Janrain waxay kaa caawin kartaa dadaalkaaga suuq-geynta faa'iidooyinka soo socda:
Kordhi Diiwangalinta Goobta - Iska yaree caqabadaha hortaagan diiwaangelinta, dardar-gelinta nidaamka isdiiwaangelinta iyo kordhinta heerarka beddelaadda ee booqdayaasha bogga ee adeegsadayaasha diiwaangashan adoo awood u siinaya gelitaanka shabakad bulsho oo hore u jirtay ama koontada boostada.
Abuur Khibrad Badan oo Shaqsiyeed - Foomamka diiwaangelinta horay u sii buuxi oo waxaad u soo bandhigtaa khibrad aad u badan oo bartilmaameed ah, khibrad shaqsiyadeed oo loogu talagalay isticmaaleyaashaada adiga oo soo dhoofinaya xogta astaanta isticmaalaha, liisaska saaxiibbada iyo buugaagta cinwaanka.
Kobci Wacyiga Nooca iyo Abuurista Gaadiidka Gudbinta -Ku xidhnow bartaada shabakada bulshada isla markaana ku dhiirrigeli isticmaalayaashaada inay ku faafiyaan waxyaabahaaga adoo u fududeynaya adeegsadayaasha inay ku daabacaan waxqabadka boggaaga shabakado bulsheed oo isku mar ah.
Tags: Gashojanraynjanrain ku hawlanis dhexgalka bulshadadiiwaangelinta isticmaalahais dhexgalka wordpressdiiwaangelinta wordpress
GROU.PS: Samee Shabakad Bulsho oo kuu gaar ah
Jidka loo beddelayo